युआरएल को सहयोगमा स्याङ्जामा स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न - Samachar PatiSamachar Pati
युआरएल को सहयोगमा स्याङ्जामा स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
स्याङ्गजा, १ पुष । ‘धूमपान, रक्तचाप, मधुमेह र कोलेस्ट्रोल कफिनका ४ खुट्टा हुन् । यीबाट टाढै रहनुस् ,’ मधुमेह, थाइराइड तथा हर्माेन रोग विशेषज्ञ डा. तारा कोइराला भन्छन् । धूमपान, रक्तचाप, मधुमेह र कोलेस्ट्रोलले धेरै रोग निम्त्याउने र उचित उपचार नगरे ज्यानै जान सक्ने जोखिम हुन्छ ।
स्याङ्जा होस्पिटल प्रालिको आयोजनामा पुतलीबजार १ चौकीमा शनिबार भएको स्वास्थ्य शिविरमा उनले यस्तो बताएका हुन् । डा कोइरालाले रोग लागे÷नलागेको पत्ता लगाउन र रोगको अवस्था थाहा पाउन राम्रा ल्याब जरुरी हुने उल्लेख गर्नुभएको थियो । थाइराइडका विभिन्न प्रकार र अवस्थाबारे प्रकाश पार्दै उनले सबै थाइराइडमा औषधी खानैपर्छ भन्ने भ्रम नपाल्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
इन्सुलिन बन्दै नबन्दा, कम बन्दा र बनेको इन्सुलिनले पनि काम नगर्दा मधुमेह हुन्छ । डा. कोइरालाले जीवनशैली, खानपान र वंशाणुगत कारणले पनि मधुमेह हुनसक्ने औंल्याउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बेलैमा पत्ता लगाएर सावधानी र उपचार गरे जीवन लामो हुन्छ, हेलचेक्र्
याई गरे आँखा बिग्रिन्छ, मृगौला खराब हुन्छ, अनेक असर हुन्छन् ।’
पोखरा, सभागृहचोकमा रहेको युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी प्रालि युआरएल)को प्राविधिक सहयोगमा भएको शिविरमा अन्य सबै प्रकारका रक्त परीक्षणमा पनि ५० प्रतिशत छुट दिइएको थियो । शिविरमा ३ सय २ जनाको सित्तैमा थाइराइड, रगतमा हुने खराब बोसो र मधुमेहसम्बन्धी रक्त परीक्षण गरिएको छ ।
कार्यक्रममा सांसद नारायणप्रसाद मरासिनीले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको संविधानले ग्यारेन्टी गरे पनि अझै राज्यले यसको ग्यारेन्टी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । उहाँले खानपान,
जीवनशैली र शारीरिक व्यायममा ध्यान दिँदै रोग लागिहाले पनि नडराउन बरु उचित उपचार गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘मलाई मधुमेह छ, हृदयघात पनि भयो । ध्यान दिएँ र पो बाचें, नदिएको भए अहिलेसम्म रहन्नथें ।’
युआरएलका प्रबन्ध निर्देशक ठाकुरप्रसाद पन्तले गण्डकी प्रदेशका बासिन्दालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा दिनु युआरएलको लक्ष्य भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘समस्या हुने सबैसँग
पैसा हुँदैन । रोग लुकाउँदा, उपचार नगर्दा ज्यानै जान सक्छ । यसैलाई मनन गरी हामी शिविरहरु आयोजना गरिरहेका छौं । ’ युआरएलले विभिन्न संघ, संस्थासँगको सहकार्यमा आयोजना
गरेको यो ५९ औं शिविर हो ।
मोरङको कानेपोखरीमा आगलागी, एकै परिवारका ४ को मृत्यु
“मधुमेह अर्थात चिनी रोग लागेको कसरी थाहा पाउने ? रोग लागेपछी के गर्ने ? रोग लाग्न नदिन यसो गर्नुहोस” (भिडियो)
चलचित्र चौका दाउको टोलि हेटौडामा